MR MRT: ရဟန်းဆိုးတို့အကြောင်း
(စင်္ကာပူနိုင်ငံ၊ မင်္ဂလ၀ိဟာရ ကျောင်းတိုက်၌) ဒုလ္လဘ၀တ်ကြသည့် စင်္ကာပူရောက် မြန်မာရဟန်းတော်များကို ရှောင်ကြဉ်ဖွယ် ရဟန်းဆိုးတို့အကြောင်း ပြောပြဖြစ်ခဲ့သည်။
(4 to5PM, 24Jan12)
- ကာမဘောဂါ၊ လူ့ချမ်းသာလည်း၊ ကင်းကွာဝေးစွ၊ သမဏ၏၊ သုခလည်းရှုံး၊ နှစ်ကျိုးဆုံးလျက်၊ ခေါင်းတုံးသာလျှင်၊ အဖတ်တင်ခဲ့၊
ဒါ အရှင်ဘုရားတို့ သိပြီးသားပဲ။ အဖွင့်နေ့က ဆရာတော်ကြီး သြ၀ါဒပေးသွားတဲ့ အထဲက လင်္ကာ။
မန်လည်ဆရာတော်ကြီး ရေးခဲ့တဲ့ မဃဒေ၀လင်္ကာသစ်ထဲက ယူထားတာ။ မန်လည်ဆရာတော် ဆိုတာ တော်တော်များများ သိကြပါတယ်။ လယ်တီဆရာတော်ကြီးနဲ့ ခေတ်ပြိုင်။ လယ်တီဆရာတော်ကြီးထက် ကြီးတယ်။ လယ်တီဆရာတော်ကြီး တောင်းပန်လျှောက်ထားလို့ ကျမ်းစာရေးရတာတောင် ရှိတယ်။ ၀ိနယသံခိပ်။ အခု ရဟန်းဆိုးတွေအကြောင်း ဆက်ပြီး ကြည့်ရအောင်။
- ဂန္ထ ၀ိပဿနာ၊ နှစ်ဖြာဓူရ၊ မလုံ့လဘဲ၊ ကိစ္စမနည်း၊ အလိုသည်း၍၊ အရည်းမပီ၊ အလဇ္ဇီဖြင့်၊ ဒုဿီကျင့်ဆန်း၊ ရှင်ပေါက်ပန်းတို့၊ ရဟန်းတမင့်၊ တ၀င့်ဝင့်နှင့်၊ မင်းကျင့်စိုးကျင့်၊ လူကျင့်ကျင့်က၊ ပျောက်လွင့်သီတင်း၊ သီလကင်း၏၊
- ကိုယ်တွင်းယုတ်မာ၊ ပါပိစ္ဆာဖြင့်၊ တဏှာအထည်း၊ လောဘသည်း၍၊ ပစ္စည်းလာဘ်သပ်၊ အပ်မအပ်က၊ ရသမျှကို၊ ပြိတ္တာ့မျိုးစေ့၊ တပွေ့ပွေ့နှင့်၊ တပ်ပြွေ့ခင်မက်၊ တသက်သက်တည့်၊
- မသုံးရက်ဟူ၊ မလှူရက်ရေး၊ မပေးရက်အား၊ မစားရက်နိုး၊ တစိုးစိုးဖြင့်၊ သူခိုးကပင်၊ ဥစ္စာ့ရှင်ထက်၊ ခင်မင်နှစ်သက်၊ နှမြောခက်သို့၊ ရမ္မက်ငြိစွန်း၊ ၀တ်သင်္ကန်းနှင့်၊ ရဟန်းဖြစ်လျက်၊ ကျင့်လွဲလက်သော်၊ ကုမ္မဂ္ဂဆိုး၊ လမ်းရိုးမမှန်၊ တိရစ္ဆာန်သို့၊ နိဗ္ဗာန်မပေါက်၊ အပါယ်ရောက်၍၊ လမ်းကောက်တိမ်းပင်း၊ ချွတ်ခဲ့ယွင်း၏၊
- ရဟန်းရဟန်း၊ မည်ပြဋ္ဌာန်းလျက်၊ ရဟန်းဟူလစ်၊ ခေါ်ရာဖြစ်ရုံ၊ စနစ်ခေါက်ချိုး၊ သလင်းပိုးလျက်၊ ချုပ်ရိုးခန်းခန်း၊ ဖန်ရည်စွန်းသား၊ သင်္ကန်းဝါ၀ါ၊ ဦးပြည်းကာဖြင့်၊ ပညာကင်းပ၊ ဒုစ္စာရနှင့်၊ သီလမဲ့မျိုး၊ အတွင်းဆိုးကား၊ အကျိုးတစိ၊ ဘယ်မှာရှိလိမ့်၊ မော်မိမော်မန်း၊ နေကာဆန်းနှင့်၊ ရဟန်းကျင့်ဝတ်၊ တပါးချွတ်က၊ လူနတ်မကြိုက်၊ ကဲ့ရဲ့ထိုက်၏။ (ပိုဒ်၊ ၄၂၅)
- ရှင်ဆိုးရှင်ညစ်၊ ရဟန်းဖြစ်လည်း၊ စင်စစ်ယုတ်မာ၊ ပါပိစ္ဆာဖြင့်၊ တကာလူဗိုလ်၊ ချီးမွမ်းဆိုနှင့်၊ ထိုထိုဖြင်ပည်း၊ ပစ္စည်းလာဘ်ကို၊ တောင့်တလို၏၊ လိုသည့်ရမ္မက်၊ ကြံဝိတက်ကြောင့်၊ အုတ်ကျက်အုန်းအင်း၊ ကြော်ငြာလျှင်း၍၊ သတင်းပေးကာ၊ ဒေသစာဖြင့်၊ မြို့ရွာဇနပိုဒ်၊ နယ်တိုက်တိုက်ကို၊ လိုက်၍ဖျက်ဆီး၊ ခိုးသူကြီးသို့၊ ရံသီးများစွာ၊ ပရိဝါနှင့်၊ မလိမ္မာသူ၊ ရှင်လူဗာလ၊ အပ္ပသုတ၊ မိန်းမယောက်ျား၊ သူတို့အားလျှင်၊ လှည့်ဖြားသမှု၊ သက်မွေးပြု၏၊
- ရှင်တုရှင်ဝါ၊ ရှင်ယုတ်မာနှင့်၊ မဟာစောရ၊ ရှင်ဓားပြတို့၊ ပါပကျင့်မျိုး၊ အလိုဆိုးဖြင့်၊ အကျိုးမဟဲ့၊ မိုက်သင်းဖွဲ့၍၊ ငရဲ့စီးပွား၊ ရှာသောလားသို့၊ တရားတရား၊ တဟားဟားနှင့်၊ ပြစ်များပြောတုံ၊ တောင်နှယ်ပုံ၏၊
- အာရုံဆိတ်ရာ၊ သုညာဂါရ၊ အရည၌၊ ကာယစိတ္တ၊ ၀ိဝေကကို၊ ရလိုသော့ပုံ၊ အချို့တုံကား၊ ရဂုံတောခွင်၊ ခိုဝင်နေငြား၊ ဆွမ်းခံစားလျက်၊ ခေါင်းပါးဟာရ၊ ၀မ်းလျလျနှင့်၊ ရသမျှဟူ၊ စပ်ဆည်းဆူ၍၊ ပံသုကူဝတ်ရုံ၊ နေပါတုံလည်း၊ ပြာပုံခဲကျ၊ ထောင်းထောင်းထသို့၊ ဥဒ္ဓစ္စထုံး၊ နှလုံးမတည်၊ ခိုင်ကျည်မဲ့လျှင်း၊ စောင့်စည်းကင်း၍၊ ခံတွင်းနှုတ်ဆော့၊ ကျင့်သွမ်းသော့၏၊
- တမော့ကြွားကြွား၊ တလွှားလွှားနှင့်၊ တရားဟောယောင်၊ ချို့ရှင်ပြောင်လည်း၊ တောင်တောင်မြောက်မြောက်၊ ပင့်မြှောက်ချနှိပ်၊ ရောင်ရိပ်ဝဲရစ်၊ လာဘ်ကိုညှစ်လျက်၊ ဗလစ်ဗလစ်၊ နှုတ်မထစ်ဘူး၊ မဆစ်မဆိတ်၊ မတိတ်အသံ၊ တညံညံဖြင့်၊ တရံမစဲ၊ ဘွာစိကြဲ၍၊ နှုတ်ရဲလျှာရွ၊
- တစ်ချို့ကမူ၊ မာနတောင်နီး၊ တက်ဘိစီး၍၊ ထေရ်ကြီးဝါကြီး၊ သိက္ခာကြီးအား၊ ခရီးလမ်းကြား၊ တွေ့ကြုံငြားလည်း၊ လေးစားမဲ့ဘိ၊ အတိမာနီ၊ မချီလက်အုပ်၊ မတုပ်မကွ၊ ဦးမချဘူး၊ ဝေးကကြဉ်ဖဲ၊ တိမ်းရှောင်လွှဲ၍၊ တပွဲထွက်ဝင်၊ ငါ့ပြင်မရှိ၊ ဟူဘိဝါ၀င့်၊ မလျော်ကျင့်၏၊ သမင့်အလား၊ တောသစ် ကျားနှင့်၊ တောသားသို့သွင်၊ ဘယ်ကျိုးထင်လိမ့်၊ ရှင်ပင်တပဲ၊ ငရဲ့ပြိတ္တာ၊ ဖြစ်တတ်စွာရှင့်၊
- တကာတကာမ၊ ဒုပ္ပညတို့၊ မြှောက်ကြအုံလှည့်၊ ကူညီဖြည့်လျက်၊ သူ၏ဆရာ၊ ငါ့ဆရာဟု၊ တဏှာရောယှက်၊ မာနတက်၍၊ သူ့ဘက်ငါ့ဘက်၊ တီးလက်ဆော်ရိုက်၊ နွားကိုတိုက်သို့၊ အမိုက်ပွဲခံ၊ ပါပကံဖြင့်၊ အုန်းညံဝိုင်းညာ၊ ပြုကြခါဝယ်၊ ဆရာကျက်ဖျင်း၊ ပညာကင်းတို့၊ အတင်းစောင်၍၊ နွားနှယ်ဝှေ့၏၊ ဝှေ့သည့်အလိုက်၊ အပြင်းတိုက်သော်၊ နွားမိုက်ကံဆိုး၊ ဦးချိုကျိုးက၊ တပိုးမှုတ်ကာ၊ ကြမ္မာချွတ်လွဲ၊ ဥက္ခောင်းကွဲက၊ အမဲစားကာ၊ ဘယ်သူနာလိမ့်၊ လွန်စွာမိုက်လှ၊ နွားဗာလသာ၊ သေရရုံတိ၊ ကျိုးမရှိဘူး၊
- စုတိပျက်စီး၊ သေခါနီး၌၊ တွတ်တီးတွတ်တာ၊ ထိန်လန့်စွာဖြင့်၊ သိက္ခာစွန့်ယောင်၊ ၀ါစွန့်ယောင်နှင့်၊ ကတောင်ကချောက်၊ ပတောက်ပရစ်၊ မိုးကြိုးပစ်ခါ၊ လက်ဆီးကာသို့၊ ထွေရာစွဲလမ်း၊ ဆိုယောင်ယမ်း၍၊ မြည်တမ်းဟိန်းဟဲ၊ တညဲညဲတည့်၊ ငရဲမီးပူ၊ အမွေယူလျက်၊ ရောရူဝီစိ၊ အောက်သို့ထိအောင်၊ ကျဘိခြုတ်ခြုတ်၊ ခံကြမ်းကြုတ်ပြီး၊ ဂိဇ္ဈကုဋ်တောင်၊ မှိုင်းမှောင်ညို့ညို့၊ ပြိတ္တာမြို့ဝယ်၊ ရှင်တို့စံခန်း၊ ကြိုးခါးဗန်းက၊ သင်္ကန်းပြောင်ပြောင်၊ မီးအရောင်နှင့်၊ ကျီးကောင်လင်းတ၊ သိန်းစွန်စသည်၊ ဆိတ်ဆွဆွဲငင်၊ ကောင်းကင်ထက်ဝန်း၊ ပြေးပျံသန်း၍၊ ရဟန်းပြိတ္တာ၊ တ၀ါဝါလျှင်၊ မဟာဒုက္ခ၊ တွင်းဆုံးကျလျက်၊ ပြင်းပြကြွက်ဆူ၊ ဟစ်ကြွေးဦ၍၊ ကယ်သူမမြင်၊ ပူပင်နွမ်းညှိုး၊ ထိုရှင်ဆိုးတို့၊ ကိုးရိုးကားယား၊ အပါယ်လားသည်။ ။ မမှားမှတ်နာ အိမ်းအိမ်းတည်း။ (ပိုဒ်၊ ၄၂၇)
- ဓမ္မိယာလဒ္ဓ၊ လိုလိုရနှင့်၊ မိဘမျိုးစစ်၊ လှူသည်ဖြစ်လည်း၊ ပစ္စဝေက္ခဏာ၊ ပညာသုတ်သင်၊ မဆင်ခြင်ဘဲ၊ ရှင်ရဟန်းများ၊ သုံးဆောင်စားမူ၊ လေးပါးပါယ်ထဲ၊ ငရဲ ပြိတ္တာ၊ မလွတ်ရာဟု၊
- မမှန်လန်းရိုး၊ ချို့ရှင်မျိုးတို့၊ တောတိုးဝသီ၊ ဗာဟီစရိုက်၊ စိတ်လိုလိုက်၍၊ ရွှေသိုက် ငွေသိုက်၊ မြေသိုက် အဂ္ဂိရတ်၊ ဘူမိရတ်နှင့်၊ မှော်နတ်အင်းအိုင်၊ ဆေးဝါးကိုင်သား၊ မဆိုင်သန့်သန့်၊ ရှင်နှင့်ဆန့်လျက်၊ ရဟန့်းသိက္ခာ၊ မဟုတ်ရာ၌၊ မိစ္ဆာဝိဇ္ဇာ၊ တိရိစ္ဆာဖြင့်၊ သင်္ချာဂဏန်း၊ သက်မွေးခန်းကို၊ ရဟန်းတန်မဲ့၊ လာဘ်ကိုငဲ့၍၊ ရှင့်ရွဲ့တကာ၊ လေ့လာတုံမှု၊ အားထုတ်ပြု၏၊
- ကံနုဉာဏ်နု၊ အမြင်နုသား၊ ဗဟုဿုနည်း၊ အရည်းမည်ရုံ၊ ဖန်ဝတ်ရုံလျက်၊ စားရုံအိပ်ပြု၊ ရှင်တစ်စုလည်း၊ စက္ခုသောတ၊ မနဟူပေ၊ ဣနြေ္ဒခြောက်ပါး၊ မစောင်းငြားဘူး၊ တရားမဲ့စွာ၊ သင်္ကန်းဝါနှင့်၊ ပညာမရှိ၊ သတိမမူ၊ ရွာနေလူသို့၊ ရွာသူတကာ၊ ၀ိသဘာဂ၊ မြင်သမျှနှိုက်၊ လောဘလိုလွန့်၊ ရှက်မတွန့်ဘဲ၊ ပုစွန့်မျက်စိ၊ ထွက်လိလိဖြင့်၊ ရာဂဂ္ဂိပွား၊ ဘက်သတ်ယား၍၊ အိုးကားမပူ၊ ဖုံးပွက်ပူဟု၊ ပုံတူတမျှ၊ တည်မရတည့်၊
- အန္ဓဗာလ၊ အချို့ကကား၊ သမဏသညာ၊ သက်သက်ကွာလျက်၊ ရှင်ဝါပရိဗိုဇ်၊ အကြံမိုက်ဖြင့်၊ ည၌ကားလူ၊ နေ့မူရဟန်း၊ အကျင့်ဆန်းနှင့်၊ သင်္ကန်းသပိတ်၊ ပရိက္ခရာ၊ ဆောင်ကာဝမ်းရေး၊ အသက်မွေး၏၊ နှောင်ဘေးနရက်၊ မျှော်မတွက်ဘူး၊ ခွေးထက်ကျင့်ဆိုး၊ ထိုရှင်မျိုးတို့၊ မရိုးဝမ်းတွင်း၊ မဖြောင့်စင်းသား၊ အဖျင်းစင်စစ်၊ သဘောညစ်လျက်၊ ကောက်ကျစ်လက္ခဏာ၊ ကျင့်ယုတ်မာ၏၊
- ပမာတူနှိုင်း၊ ပုံဖြင့်ခိုင်းသော်၊ ထွန်ကိုင်းအလား၊ အဖျားကောက်ကွေး၊ လရေးသဖွယ်၊ အလယ်ကောက်ခြင်း၊ မကြွင်းထိုမျှ၊ သုံးဌာနလုံး၊ စက ဆုံးရောက်၊ နွားသေးကောက်သို့၊ အကောက်သုံးပါး၊ ကျင့်ပြောက်ကျားတည့်၊ (ပိုဒ်၊ ၄၂၈)
ဣဏပရိဘောဂ = အကြွေးတင်သည့် သုံးဆောင်နည်း
ဣဏ = အကြွေး
ပရိဘောဂ = သုံးဆောင်ခြင်း
တရားသဖြင့် ရလာတဲ့ ပစ္စည်း၊ အလွန်ဆုံး ပြောရရင် ကိုယ့်မိဘ ကိုယ့်ဆွေမျိုး လှူတဲ့ပစ္စည်း ဖြစ်နေပါစေ ပစ္စဝေက္ခဏာ မဆင်ခြင်ဘဲ စားသောက်မိတယ်၊ သုံးဆောင်မိတယ်ဆိုရင် အကြွေးတင်တယ်။ ပြန်ဆပ်ရလိမ့်မယ်။
တစ်ခါတုန်းက ကျောင်းနားမှာ လယ်ထွန်နေတဲ့ ဒကာတစ်ယောက်က နွားတွေကို ရိုက်နေလို့ ဘုန်းကြီးက ဒကာဆီသွားပြီး ဆုံးမတယ်တဲ့။
“ဒကာကြီး . . . နွားတွေကို သိပ်မရိုက်ပါနဲ့”ပေါ့။
လယ်သမားကြီးက ပြန်လျှောက်လိုက်လို့ ဘုန်းကြီးလည်း ခပ်ကုတ်ကုတ် ပြန်လာခဲ့တယ်တဲ့။
“ရိုက်မှာပေါ့ ကိုယ်တော် . . . သူတို့က အရင်ဘ၀က ပစ္စဝေက္ခဏာမှ မဆင်ခြင်ခဲ့ဘဲကိုး . . .။”
ဒီတော့ ကြွေးမတင်အောင် ပစ္စဝေက္ခဏာ ဆင်ခြင်ကြရမယ်။ အနည်းဆုံး တစ်ရက်တစ်ခါ အရုဏ်မတက်ခင်မှာ ပစ္စဝေက္ခဏာ ဆင်ခြင်ရတယ်။ မဆင်ခြင်မိရင် အကြွေးတင်တယ်။
သင်္ကန်း၌ ဆင်ခြင်ရန် လင်္ကာ
ချမ်းပူကိုဖျက်၊ ခြင် မှက် လေ နေ၊ ကင်းမြွေလွှဲသုန်၊ ဟိရီဂုဏ်ကို၊ ကုန်စေတတ်စွာ၊ ကိုယ်အင်္ဂါကို၊ လုံပါစေလို၊ ကိုယ်ကိုစံပယ်၊ ဆင်ယင်မယ်ဟု၊ စိတ်ဝယ်မသန်း၊ ဤသင်္ကန်းကို၊ ဖုံးလွှမ်းသုံးဆောင်ပါသတည်း။
ဆွမ်း၌ ဆင်ခြင်ရန် လင်္ကာ
ဤသည့်စားဖွယ်၊ အမယ်မယ်ကို၊ မြူးရယ်မာန်ကြွ၊ လှပရေဆင်း၊ ပြည့်ဖြိုးခြင်းငှါ၊ မသုံးပါဘူး၊ လေးဖြာဓာတ်ဆောင်၊ ဤကိုယ်ကောင်သည်၊ ရှည်အောင်တည်လျက်၊ အသက်မျှတမ်း၊ မမောပန်းငြား၊ ဘုရားသာသနာ၊ ကျင့်နှစ်ဖြာကို၊ ကျင့်ပါနိုင်စေ၊ ဝေဒနာဟောင်းသစ်၊ မဖြစ်စေရ၊ ယာပိုထ်မျှလစ်၊ ခပ်သိမ်းပြစ်ကို၊ မဖြစ်လေအောင်၊ ချမ်းမြေ့အောင်ဟု၊ သုံးဆောင်မှီဝဲပါသတည်း။
ကျောင်း၌ ဆင်ခြင်ရန် လင်္ကာ
ချမ်းပူကိုဖျက်၊ ခြင် မှက် လေ နေ၊ ကင်းမြွေဝေးမှု၊ ဥတုဘေးဘျမ်း၊ မသန်းကင်းစင်၊ စိတ်ကြည်လင်ကြောင်း၊ နေရာကျောင်းကို၊ ကိန်းအောင်း မှီခိုပါသတည်း။
ကျင်နာခံခက်၊ နှိပ်စက်ဖိစီး၊ ဖြစ်ပြီးဖြစ်လာ၊ ဝေဒနာကို၊ စွန့်ခွါပယ်လျှင်း၊ ဆင်းရဲကင်း၍၊ လူမင်းမြတ်စွာ၊ သာသနာကို၊ ကြည်သာရွှင်လန်း၊ ကျင့်ဖြည့်စွမ်းဖို့၊ ရည်မှန်း သုံးဆောင်ပါသတည်း။
ကြွင်းသော အသုံးအဆောင်များကို ဆင်ခြင်ရန်
ဖိနပ်ဆီမီး၊ ထီးတောင်ဝှေးစ၊ ဟူသမျှကို၊ အေးမြချမ်းပူ၊ မြေငူသစ်ငုတ်၊ ခလုတ်ဆူးငြောင့်၊ မနှောင့်ဘေးဘျမ်း၊ မသန်းကင်းစင်၊ စိတ်ကြည်လင်၍၊ အားအင်ပြည့်မာ၊ သာသနာကို၊ ကောင်းစွာကျင့်ဆောင်၊ ဖြည့်နိုင်အောင်ဟု၊ သုံးဆောင်မှီဝဲပါသတည်း။
ပစ္စဝေက္ခဏာ မဆင်ခြင်မိရင်လည်း အလှူရှင်တွေကို မေတ္တာပို့ရမယ်။ မေတ္တာပို့ရင်လည်း ဣဏပရိဘောဂ မဖြစ်ဘူး။
နေတဲ့အခိုက်အတန်းလေးမှာ အဖွင့်နေ့က ဆရာတော်ကြီး သြ၀ါဒ ပေးသွားသလို့ ခေါင်းတုံးပဲ အဖတ်တင်တဲ့ ရဟန်းမျိုး မဖြစ်အောင်၊ အခု ပြောခဲ့တဲ့ ရဟန်းဆိုးတွေလို မဖြစ်အောင်၊ ကြွေးလည်းမတင်အောင် နေကြဖို့ပဲ။
လင်္ကာတွေရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို တတ်သလောက် မှတ်သလောက် ရှင်းပြခဲ့ပေမယ့် ပြန်စဉ်းစားပြီးရေးဖို့ ပျင်းနေပါသေးတယ်။
Posted by Ashin Acara. at 2:25 AM
YL January 24, 2012 at 3:17 AM